‘विदेशमा धेरै नेपालीकाे राेजगारी गुमेकाे छ, सकेसम्म सबैलाई एनआरएनएले सहयोग गरिरहेको छ’ – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १ गते २०:३९
विश्वभरि रहेका नेपालीहरूसँग समन्वय गर्ने संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए नै हो। विश्वका ८० वटाभन्दा धेरै मुलुकमा सञ्जाल भएको एनआरएनएले कोरोना भाइरसको वैश्विक महामारीका बेला के गरिरहेको छ? विश्वभरि रहेका नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगाउन के कस्ता पहल गरिरहेको छ? र, संक्रमितको उपचारका विषयमा भइरहेका प्रयासका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तसँग हेल्थपोस्ट नेपालका अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीः
विश्वका विभिन्न मुलुकहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, इटाली लगायतका युरोपेली मुलुकसहित विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ?
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट अधिकांश देश प्रभावित भइसकेका छन्। नेपालीहरू पनि यसबाट अछुतो रहने स्थिति छैन। यो बाध्यात्मक परिस्थितिसँग जुध्नका लागि अपील गरिरहेका छौं। र, गैरआवासीय नेपाली संघले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका नेपाली नागरिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने तथा उपचारको व्यवस्था गर्न समन्वय गरिरहेको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट १३ जनाको निधन भएको छ। बेलायतमा ७ जना, संयुक्त राज्य अमेरिका ५ जना र दुबईमा १ जना नेपाली नागरिकको निधन भएको छ। हामीले अरू संक्रमितहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौँ।
कुन देशमा कति नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन्?
गैरआवासीय नेपाली संघलाई आएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्ममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा गरेर एक हजार ५ सय नेपाली नागरिकहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। सबैभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ। बेलायतमा पनि पूर्वगोर्खा सैनिकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको जानकारी आएको छ। स्पेनमा ४ जना नेपालीको उपचार चलिरहेको छ। इटाली, फ्रान्स सहित युरोपेली मुलुक तथा खाडी मुलुक, मलेशियादेखि अष्ट्रेलियासम्मका नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको जानकारी आएको छ। कुन देशमा कति भन्ने यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रयासमा हामी छौँ।
अनि ती देशमा कोरोना संक्रमित नेपालीको उपचार कसरी हुँदैछ?
हरेक देशले नेपालीहरूको उपचार पनि आफ्नो देशकै नागरिक सरह गरेका छन्। विशेषतः कोरोनाको संक्रमण भइसकेपछि यो वा त्यो भनेर भेदभाव गर्ने कार्य निकै जोखिमपूर्ण हुने भएकाले पनि सबै देशमा समान उपचार पद्धति अपनाइएको छ।
विश्वका कोरोना प्रभावित देशहरूमा रहेका नेपालीहरूसँग गैरआवासीय नेपाली संघले कसरी समन्वय गरिरहेको छ?
सबैभन्दा पहिले आफूलाई सुरक्षित राख्न नै गैरआवासीय नेपाली संघको अपील छ। नेपाली नागरिक जुनसुकै देशमा भए पन उहाँहरूका हरेक सुख-दुःख हाम्रा आफ्नै हुन्। आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई संकटको घडीमा साथ दिनु हाम्रो दायित्व हुन आउँछ। गैरआवासीय नेपाली संघमा आवद्ध सबै साथीहरूले जुनसुकै देशमा भए पनि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई सुरक्षित राख्न कटिबद्ध हुनुहुन्छ। सचेतना अभियानहरू आन्तरिक रुपमा चलिरहेका छन्। कोही नेपाली कुनै देशमा समस्यामा नपरुन् भनेर उच्च सावधानी र सतर्कताका साथ गैरआवासीय नेपाली संघले काम गरिरहेको छ।
धेरै देशका नेपाली राजदूतावास र राजदूतहरूले गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गर्ने भन्नु भएको छ। केही दूतावासले एनआरएनएसँग मिलेर संयुक्त संयन्त्र पनि निर्माण गरेका छन्। त्यसमा दूतावास, एनआरएनएसँग विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय नेपाली संघ-संस्थाहरू सम्मिलित छन्। दूतावासहरूको रेस्पोन्स राम्रो छ। यो लडाइँमा दूतावासहरूलाई हाम्रो साथ छ।
विशेषगरी, कुन वर्ग–समुदायका नेपालीहरू आर्थिक रुपमा बढी प्रभावित छ? कतिले त रोजगारी गुमाउनु परेको होला?
विद्यार्थी र श्रमिकहरूमा अलिकति समस्या देखिएको छ। नेपालबाहिर रहेर काम गर्दै आएका धेरै श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ। पढ्नका लागि आएका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खान र बस्न समस्या भयो भन्ने जानकारी आएको छ। बस्न समस्या भएकाहरूलाई अनुकूल हुने पर्ने स्थानमा अन्य साथीहरूसँग मिलाएर राखिदिन पहल गरिरहेका छौँ। खानाको समस्या भएका विद्यार्थी साथीहरूलाई दाल, चामल, तेल आदि आवश्यक सामग्री पुर्‍याइदिने गरेका छौँ। गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा खबर गर्ने साथीहरूलाई तत्काल आवश्यक उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। र, समस्यामा कोही पर्नु भएको भए खबर गर्न पनि आग्रह गरेका छौँ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, इटाली, स्पेन जस्ता कोरोनाबाट धेरै प्रभावित मुलुकहरूमा त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी तथा सदस्य र राष्ट्रिय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले नेपालीहरूको राहत तथा उपचारमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ?
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीमा आफ्नो सुरक्षा प्रमुख हो। हामीले पहिले आफू बच्नु भएका छौँ। विशेषगरी, फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने, हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा काम गर्ने तथा चिकित्सा र नर्सिङको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली साथीहरू धेरै भएकाले उहाँहरू जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यसैले, आफूलाई सुरक्षित राख्न आग्रह गरेका हौँ। र, कोही नेपालीलाई खान र बस्नलाई समस्या भएमा गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्य भए पनि नभए पनि तत्कालै समाधान खोज्नु भएका छौँ। र, खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने नसके सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास र हामीलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छौँ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले हामीले दिएको निर्देशन पालना गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति व्यवस्थित छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको यो प्रयासलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरूले कसरी सहयोग गरिरहेका छन्?